Xildhibaan Jeesoow oo beeniyey in uu fashilmay mooshinkii kadhanka ahaa Gud. Jawaari (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 15, 2018 1:43 b 0
Xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka keenay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Somaliya ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir ku beeniyey inuu fashilmay mooshinkaasi, wuxuuna sharraxaad ka baxshay waxa dhabta ah oo uu daarran yahay mooshinku.
Xildhibaanka ayaa dhanka kale si kulul u beeniyey warar soo baxay oo sheegaya in kacdoonkoodu la xiriiro xiisadda heshiiska Berbera. Isaga oo jooga Muqdisho ayuu waxa uu u warramay Axmed Sh. Max’ed “Tallman” oo ku sugan studiyeheenna Daljir Bossaso.